एकै दिन भित्रियो १३४ ट्यांकर तेल, कुन नाकाबाट कति भित्रिए ? | Jukson
अघोषित नाकाबन्दी भारतले खुकुलो बनाउँदै गएपछि नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण बढ्दै गएको छ । मंगलबार मात्र एक सय ३४ ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले मंगलबार मात्रै एक सय ३४ ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ र २८ बुलेट ग्यास नेपाल भित्रिएको जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थका ट्यांकर नेपाल भित्रिने क्रम बढेको ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘डिजेल र पेट्रोल क्रमश: १०५ र २९ ट्यांकर भित्रिएका छन्,’ महानिर्देशक ढुंगानाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भन्सार नाकाबाट २८ बुलेट खाना पकाउने ग्यास नेपालतर्फ आएको छ । पेट्रोलियम आउने क्रम बढेको छ ।’
भारतसँगको अधिकांश नाकाबाट आयात सहज भएको छ । तर, वीरगन्ज भन्सार नाका भने ठप्प छ । वीरगन्ज भन्सारले राजस्व संकलनको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रवेशका लागि हजारौँ पेट्रोलियमका ट्यांकर तथा ग्यास बुलेट र मालवाहक सवारीसाधन रोकिएका छन् । महानिर्देशक ढुंगानाले वीरगन्ज भन्सार खुलाउन भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको बताए ।
केरुङ पुग्ने बाटो खुल्यो
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरुङ पुग्ने बाटो खुलेको छ । १२ वैशाखको भूकम्पपछि आएको पहिरोले क्षति पुर्‍याएको रसुवागढीबाट करिब २६ किलोमिटर सडक चीनले मर्मतसम्भार गरी सडक सुचारु गरेको हो ।
रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख केदारप्रसाद पनेरूले बुधबार चिनियाँ पक्षले छलफलका लागि केरुङमा बोलाएको जानकारी दिए । ‘रसुवागढीबाट केरुङ पुग्ने सडक सुचारु भएको जानकारी दिँदै चिनियाँ पक्षले नाका खुलाउन छलफलका लागि बुधबार बोलाएको छ,’ पनेरूले भने, ‘अध्यागमन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको टोलीसहित हामी त्यसतर्फ जाँदै छौँ ।’ उनका अनुसार नेपाली व्यापारीले केरुङसम्म ढुवानी गर्न ग्वान्जाउका ढुवानी व्यवसायीलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।
अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै खराब
अब गृहमन्त्रीलाइ पनि 'बुलेट प्रुफ' गाडी